Degdeg oo sug, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Mararka qaar, waxay umuuqataa, sugiddu waa waxa noogu adag. Ka dib markaan u maleyno inaan ogaanno waxaan u baahanahay oo aan u maleynay inaan diyaar u nahay, inteena badankeen helitaanka sugitaan aad u dheer oo aan loo dulqaadan karin. Adduunkeena galbeedka, waxaan noqon karnaa jahawareer iyo samir haddii aan ku qasbanaano inaan shan daqiiqo ka sugno makhaayad raashin deg deg ah anoo fadhiya gaariga oo aan dhageysaneyno muusikada. Bal ka fikir sida ayeeyada ayeeyaday u arki laheyd.
Masiixiyiinta, sugiddu way ka sii murugsan tahay xaqiiqada ah inaan Ilaah aamino, badanaana way ku adag tahay inaan fahamno sababta aan u sameeyno waxyaabaha aan si qoto dheer u rumeysan nahay inaan u sii wadno tukaday oo sameeyey wax kasta oo suurto gal ah, ma helin.
Boqor Saa'uul wuu walwalsanaa oo cidhiidhiyay intuu sugayay Samuu'eel inuu yimaado allabari dagaalka (1 Sam 13,8). Askartii way xasilloonaayeen, qaar baa isaga tagey, oo jahwareer ku muujiyey sugitaan aan muuqan, ayuu ugu dambeyntii u soo bandhigay dhibanaha laftiisa, dabcan, waa sidaas markii ugu dambeyntii Samuel yimid. Dhacdadan ayaa dhalisay dhammaadkii boqortooyadii Saas (Aayadaha 13aad).
Waqti ama mid kale, inteena badan badiyaa waxaan dareemnay sidii Saa'uul oo kale. Waxaan aaminsanahay Ilaah, laakiin ma fahmi karno sababta uusan u faragelin ama u dejin baddeena roobka. Waan sugeynaa oo waan sugeynaa, waxyaabaha waxay umuuqdaan inay kasii darayaan oo ay sii xumaanayaan, ugu dambeyntiina sugitaanku wuxuu umuuqdaa inuu dhaaftay wixii aan qaadi karno. Waan ogahay in sidan oo kale mararka qaarkood dareento markii aan iibiyay gurigeenna Pasadena.
Laakiin Ilaah waa aamin, wuxuuna ballanqaaday inuu inaga qaadi doono wax kasta oo nolosha aan la kulano. Mar labaad ayuu haddana caddeeyey. Mararka qaar wuu inala raaci karaa silica iyo mararka qaarkood - marar badan, waxay umuuqataa, inuu joojinayo wixii aan waligii muuqan. Si kasta oo ay ahaataba, iimaankeenu wuxuu noogu yeerayaa inaan ku kalsoonaano isaga - oo aan aaminsanaano inuu isagu wanaag iyo wanaag noo samayn doono. Dib-u-eegis, waxaan inta badan arki karnaa xoogga aan ka helnay habeenkii dheer ee sugida oo aan bilawno inaan fahanno in khibradda xanuunka leh ay ahayd mid duco ah.
Si kastaba ha noqotee, waa murugo yar in la adkaysto inta aan soo dhex marineyno, oo waxaan u naxariisaneynaa abwaankii soo qoray: «Naftaydu aad bay u cabsi qabtaa. Oh, Sayidow, ilaa goorma! » (Sabuurradii 6,4). Waxaa jira sabab sababta qadiimiga King James Version loogu tarjumay ereyga "dulqaad" leh "silica dheer"! Luukos wuxuu inoo sheegayaa laba xerti oo ka murugooday jidka Emmaus maxaa yeelay waxay umuuqdeen in sugitaankoodu micno darro wax walbana waa lumiyeen maxaa yeelay Ciise wuu dhintay (Luukos 24,17). Laakiin isla waqtigaas, Sayidkii sarakiciyay, oo ay iyagu rajaynayaan oo dhan, ayaa dhinac iska dhigay oo dhiirrigeliyay - maysan aqoonsan (Aayadaha 15aad). Mararka qaar wax la mid ah ayaa nagu dhaca.
Inta badan ma garawsanno qaababka uu Eebbe inala jiro, noo raadinayo, na caawiyo, na dhiirrigeliyo - illaa waqti dambe oo waqtiga ka dambeeya. Waxay ahayd oo keliya markii Ciise uu kibis kula jejebiyey iyaga in indhahoodu furmeen oo ay garteen isaga iyo wuu ka lumay iyaga. Oo waxay isku yidhaahdeen, Miyaan qalbigeennu gubanin intuu jidka inagula hadlayay iyo intuu Qorniinkii inoo furayay? (Aayadaha 31aad).